Golaha Shacabka oo uu maanta ka baaqanayo kulankii 5-aad – Kalfadhi
April 20, 2019 Kalfadhi
Kulanka Golaha Shacabka ee maanta ayaa baaqday, iyada oo uu kulan ay yeeshaan golaha ay ugu dambeysay Arbacadii (2 maalin kahor). Baaqashada kulanka Golaha Shacabka ee maanta ayey xildhibaanno ka tirsan golaha u sheegeen Kalfadhi ineysan ogeyn sababta ka dambeysa. Kalfadhi ayaa ogaaday inaan xildhibaannada golaha loo dirin farriin-qoraalkii loogu sheegi jiray inuu kulan jiro iyo ajandaha kulankaas.
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo todobaadkii saddex jeer kulma (Sabti, Isniin & Arbaca) ayaa kulankoodii ugu dambeeyey waxay kaga doodeen Doorashooyinka Qaranka, iyaga oo su’aalo arrinkaas ka weydiiyey Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey).
Guddoonka Golaha Shacabka kama cudur-daartaan inta badan sababta baaqashada kulamada, ilaa inuu jiro khilaaf la og yahay maahee, kaas oo ay dadkoo dhami wada arki karaan iney sababtiisa tahay baaqashada kulamada golaha. Xildhibaanno ka tirsan golaha ayaa dhawr mar la wadaagay Kalfadhi in ay aad uga xun yihiin inuu maalinna baaqdo Kulanka Golaha Shacabka.
Waa markii lixaad, Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka, oo uu baaqanayo kulankiisa caadiga ah. 1-dii, 8-dii, 10-kii, 15-kii iyo 20-ka bishaan Maarso, oo maanta ku began, ayuusan Goluhu kulmin. 8-dii bishaanna waa uu furmay Kulanka Golaha, laakiin waa uu fashilmay, oo waxa uu soo xirmay iyadoon waxba laga doodin.
Kulamada baaqday qaarkood waxay u furmi waayeen Kooram la’aan, laakiin qaar kale ayaan la ogeen sababta baaqashadooda. Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabka, oo go’aamiya kulamada golaha, ayaan la wadaagin xildhibaannada iyo shacabkaba sababta ay kulamadaas u qabsoomi waayeen, waxaana arrintan ay xitaa soo taagneyd ilaa Kalfadhiyadii hore oo dhan.